Islaamka iyo Dimoqraadiyaddu Ma is diidayaan? | Radio Muqdisho	Saturday, May 25th, 2013	Bogga Hore
Islaamka iyo Dimoqraadiyaddu Ma is diidayaan?
Published on May 29, 2012 by Liibaan · 1 Comment · 7,445 views
Maxaa loola jeedaa Dimoqraadiyad, Maxayse ka qabtaa Shareecada Islaamku? Maxaa ka jira in Dimoqraadiyaddu ay ka hor jeeddo Shareecada Islaamka?
Mabaadi’da Shareecada Demoqoraadiyadda waxaa ku jira in mudnaanta la siiyo wada tashiga iyo in la qaato wixii ay dadka badankood raalli ku yihiin, iyo in la soo doorto madaxda ama maamulayaasha dalka hoggaaminaya oo ay heystaan kalsoonida Shacabka ay u talinayaan.
Nidaamyada Dimoqraadiga ahi,waxay oggolyihiin in lala xisaabtamo madaxda, lana xiro ama xilka laga qaado haddii ay ku takri faleen mas’uuliyaddii ay bulshada u hayeen.
In la daryeelo muwaadinka, oo qof waliba u noqdo, hadalkiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed, taas oo aan marnaba loo ciqaabi karin ama loo ciriiri gelin karin.
Mabaadi’daas iyaga ahi sow mahan kuwii ay Shareecada Islaamku na fartay?
Maxaase ku jaban haddii aan dalalka iyo dadyowga kale ee caalamka ka qaadanno wax kasta oo horumar lagu gaari karo, mar haddii aysan liddi ku ahayn Shareecada Islaamka iyo Dhaqankeenna Suubban?.
Islaamka iyo Demoqraadiyadda, Miyay is diidayaan? Waa Mowduuca Barnaamijka Tubta Toosan ee Toddobaadkan, oo uu nagala qeyb galayo Sheikh Muuse Macallin Cagaweyne oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed.
Dhageyso Tubta toosan 28.05.2012
Ismacil says:	July 17, 2012 at 10:51 pm	Marka hore datka halo sharxo demogradi wamaxay demogradi waa xur dinta islamka waa xur qofka lama jujubi karo wax waliba waheshis lagaro iyo shacbiyad lagu shaqeyo